Public Health in Myanmar: HIV / AIDS
HIV / AIDS ရောဂါ ဟာ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပြုနေဆဲ ကပ်ရောဂါ (Pandemic diseases) များထဲ မှတစ်မျိုး အပါ အ၀င် ဖြစ်ပါတယ်.. HIV ပိုးကို စတင် တွေ့ရှိ ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ထိ လူ့အသက် ပေါင်း ၂၅ သန်းကျော် ဆုံးရှုံး စေခဲ့တဲ့ ကူးစက် ရောဂါ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်.. ၂၀၀၅ ခုနှစ် တစ်နှစ်ထဲ မှာပင် လူဦးရေ ၂.၄ မှ ၃.၃ သန်း ထိ သေဆုံး ခဲ့ပါတယ်.. ၎င်း ထဲတွင် ကလေး ၅၇၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင် ပြီး သေဆုံး သူများ ရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံ ဟာ ဆာဟာရ တောင်ပိုင်း အာဖ ရိက နိုင်ငံ များမှ ဖြစ်ကြ ပါတယ်.. HIV ကူးစက် ခံရသူ ပေါင်းသည် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ ရဲ့ ၀.၆% ရှိနိုင် ကြောင်း ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်...
HIV ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus ကို အတို ကောက် ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပြီး AIDS ဆိုသည် မှာ HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်ပွား သော ရောဂါ လက္ခဏာ စု (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) ကို ခေါ်ဆို တာဖြစ် ပါတယ်.. HIV ဗိုင်းရပ်စ် ဟာ Retroviridae အုပ်စု ၀င် ဖြစ်ပြီး HIV-1 နဲ့ HIV-2 ဆိုပြီး မျိုးကွဲ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်.. HIV-1 ဟာ ပိုမို ပြင်းထန် ကူးစက် လွယ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာ လုံး ပျံ့နှံ့ ကူးစက် နေတဲ့ အမျိုး အစား ဖြစ်ပါတယ်.. HIV-2 ကတော့ ကူးစက် မှုနှုန်း နည်းပါး ပြီး အဓိက အားဖြင့် အနောက် အာဖရိက မှာ အတွေ့ များပါတယ်...
HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရ ပြီဆိုလျှင် လူ့ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း ခုခံမှု စနစ် (Immune System) တွင်ရှိ CD4 Cell (Helper T Cells) ကို အဓိက ကူးစက် ဖျက်ဆီး ပါတယ်.. ပုံမှန် ကျန်းမာသော လူတွင် CD4 Cell အရေ အတွက် ဟာ သွေး တစ် မိုက်ခရို လီတာ မှာ ၁၂၀၀ (1200 cells/μl) ရှိပါတယ်.. HIV ဗိုင်းရပ်စ် က CD4 Cell များကို နည်းလမ်း (၃) သွယ် ဖြင့် တိုက်ခိုက် လျော့နည်း စေပြီး ခန္ဓာကိုယ် ခုခံမှု စနစ် ကို ကျဆင်း စေပါတယ်..
HIV ဗိုင်းရပ်စ် က CD4 Cell ကို တိုက်ရိုက် ကူးစက် ဖျက်ဆီး ခြင်း (Direct Viral Killing)
HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရသော CD4 Cell များ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မှုမြန် လာခြင်း (Increased rates of apoptosis in infected cells)
HIV ကူးစက် ခံရသော CD4 Cell များကို CD8 Cell များက ရန်သူ ပိုးမွှား ထင်မှတ် ပြီး မှားယွင်း တိုက်ခိုက်ခြင်း (Killing of infected CD4 T Cells by CD8 cytotoxic cells that recognize infected cells)
တို့ကြောင့် CD4 Cell များ လျော့နည်း ကျဆင်း လာစေ ပါတယ်...
HIV ကူးစက် မှုရှိမရှိ စစ်ဆေး ရန် HIV antibody ကို လျှင်မြန်စွာ စစ်ဆေး ပေးသော ကိရိယာ (Rapid HIV test) များဟာ နေရာ အနှံ့ အလွယ် တကူ ရရှိ နိုင်ပါတယ်.. အခြား စစ်ဆေး နိုင်သော စမ်းသပ် နည်းများ ကတော့ ELISA , Western Blot နည်းများ ဖြစ်ပါတယ်.. HIV ပိုးဝင် ရောက်ပြီး ချိန်မှ HIV antibody စတင် စစ်ဆေး တွေ့ရှိ ချိန်ထိ ကာလကို Window period ဟု ခေါ်ပါတယ်.. ဒီကာလ မှာ ဆိုရင် HIV ကူးစက် ခံရ မှန်းမသိ နိုင်တဲ့ အချိန် ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ ၍ အခြား သူသို့ လည်း ကူးစက် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်.. ၉၉% သော HIV ကူးစက် ခံရသူ များသည် ကူးစက် ခံရပြီး ၃ လ အကြာတွင် HIV antibody (HIV test) စစ်ဆေး တွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်...
ရောဂါ လက္ခဏာ များကို အဓိက (၄) ပိုင်း ခွဲခြား ထားပါတယ်..
ရောဂါပျိုးခြင်း (Incubation Period)
ဒီကာလ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် တွင်း ရောဂါ ပိုးဝင် ရောက်ပြီး နောက် ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ် အတွင်း ရောဂါ ပျိုးချိန် (Incubation Period) ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီအချိန် မှာဆို ရင် ဘာလက္ခ ဏာမှ မပြ တတ်ပါဘူး..
လတ်တလော HIV ပိုး ၀င်ရောက်ပြီး လက္ခဏာများ (Acute HIV Infection)
HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကူးစက် ခံရပြီး ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ် အတွင်း ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်.. ကူးစက် ခံရ သူများ ၏ ၈၀% မှ ၉၀% သည် ဖျားခြင်း၊ အကျိတ်များ ပေါ်လာခြင်း၊ လည်ပင်း နာလာခြင်း၊ ကြွက်သား နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ နုံးခွေ တတ်ခြင်း၊ ပါးစပ် နှင့် လည်ချောင်း တစ်ဝိုက် နာကျင် တတ်ခြင်း စသည့် တုပ်ကွေး လက္ခဏာ ကဲ့သို့ ဖြစ်ပွား တတ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်ပတ် မှ ၄ ပတ်ထိ ကြာတတ် ပါတယ်.. ဒီလို လက္ခဏာ တွေဟာ တုပ်ကွေးနဲ့ အခြား ရောဂါ ပိုးဝင် လက္ခဏာ တွေနဲ့ တူတာ ကြောင့် HIV ပိုး ကူးစက် ခံရ မှန်း ကွဲကွဲ ပြားပြား မသိနိုင် ပါဘူး..
HIV ပိုးရှိပြီး လက္ခဏာ မပြသသော ကာလ (Latency Stage)
ဒီကာလ မှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန် လာလို့ ဗိုင်းရပ်စ် အကောင်ရေ လျော့နည်း နေသော အချိန် ဖြစ်ပြီး ကူးစက် ခံရသူ ၏ ကိုယ်ခံ အား အခြေ အနေ အရပ်ရပ် ပေါ် မူတည်ပြီး ၂ ပတ်မှ နှစ် ၂၀ ထိ ကြာမြင့် နိုင်ပါတယ်..
ခုခံအား ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာစု ပေါ်လာခြင်း (AIDS)
ဒီအချိန် မှာ ဆိုရင် CD4 Cell အရေ အတွက် ဟာ သွေး တစ်မိုက် ခရို လီတာ မှာ ၂၀၀ အောက် ရောက်လာ ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား လည်း ကျဆင်းလာ ပါတယ်.. အခုလို ခုခံအား ကျဆင်း လာချိန်မှာ အခြား သော အခွင့် အခါသင့် ရောဂါ များ (Opportunistic Infections) ပေါ်ပေါက် လာပြီး အသက် အန္တရာယ် ကို ခြိမ်းခြောက် လာပါတယ်.. တီဘီ (TB)၊ ခုခံအား ကျဆင်းချိန် ဖြစ်ပွား သော နမိုးနီးယား (PCP)၊ ရေယုန် (Herpes simplex)၊ မှက္ခရု (Oral Candidiasis)၊ အူလမ်း ကြောင်း ပိုးဝင် ခြင်း (Bacterial Enteric Infection)၊ အကျိတ် ကင်ဆာ များ (Non-Hodgkin Lymphoma & Kaposi's sarcoma) အစ ရှိသဖြင့် အခွင့် အခါ သင့်ရောဂါ များ ဖြစ်ပွား လာပါတယ်.. ခုခံအား ကျဆင်း ချိန်တွင် အများစု ခံစားရ သော ရောဂါ လက္ခ ဏာများမှာ
ကိုယ်အ လေးချိန် မူလထက် ၁၀% ကျော် ကျဆင်းခြင်း၊
တစ်လ ထက်ကျော် ၍၀မ်း လျှောခြင်း၊
တစ်လ ထက်ကျော် ၍ ဖျားခြင်း၊ (တစ်သ မတ်တည်း (သို့) အတက် အကျ အားဖြင့် ဖျားတတ် ပါတယ်)
ကြာရှည်စွာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောလာခြင်း၊
အစ ရှိသဖြင့် ဖြစ်တတ် ပါတယ်..
HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် နိုင်သော နည်းလမ်း များမှာ အများ သိရှိ ပြီးဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ရောဂါ ပိုးရှိသူ နှင့် လိင်တူ လိင်ကွဲ ဆက်ဆံ ခြင်း၊ ရောဂါ ပိုးပါ သော သွေးသွင်း မိခြင်း၊ ရောဂါ ပိုးရှိ သူနှင့် ဆေးထိုး အပ် ဆေးထိုး ပြွန် မျှဝေ သုံးစွဲ ခြင်း - ဆေးမင် ကြောင် ထိုးခြင်း - ဓါတ်အပ် စိုက်ခြင်း၊ ရောဂါ ပိုးရှိသော သွေး/ ခန္ဓာကိုယ် အရည် များမှ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ သို့ ထိမိ၍ ကူးစက်ခြင်း (ဥပမာ - ဆေးထိုး အပ်စူး မိခြင်း၊ ခန္ဓာ ကိုယ်ရှိ ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ - အခြား ဒဏ်ရာ များကို သွေးထိ မိခြင်း၊ မုတ်ဆိတ် ရိပ်ဓား မှ တစ်ဆင့် ထိရှ ကူးစက်ခြင်း)၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင် မိခင် မှ ကလေး သို့ကူး စက်ခြင်း၊ စသည် တို့ ဖြစ် ပါတယ်..
HIV ကူးစက် ခံရ ခြင်းကို လုံးဝ ပျောက်ကင်း စေနိုင် သော ဆေးဝါး များ ယခု အချိန် ထိမ ပေါ်သေးပါ.. ဗိုင်းရပ်စ် ပေါက်ပွား မှုကို ထိန်းချုပ် ပေးပြီး CD4 Cell အရေ အတွက် ဆက်မလျော့ ကျစေ ခြင်းဖြင့် ရောဂါ ရှေ့ဆက် တိုးမှုကို ဟန့်တားသော ဆေးများ သာရှိ ပါတယ်.. ဆေးကုသ ပေးရခြင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့
HIV ပိုးကြောင့် ခံစား ရသော ရောဂါ ဝေဒနာ များကို သက်သာ စေရန် နှင့် ရောဂါ ပိုးအရေ အတွက် ကိုလျှော့ ချပေးရန်၊
လူနာ၏ သက်တမ်း ကို ဆွဲဆန့် ပေးရန်၊
လူနာ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေပြီး အလုပ် ပြန်လုပ် နိုင်စေရန်
ခုခံမှုကျဆင်းသော ရောဂါ အတွက် သုံးသောဆေးဝါးများ
= Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
= Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor
= Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
= Protease Inhibitor
အခု လက်ရှိ လက်ခံ သုံးစွဲ နေတဲ့ ကုထုံး ကတော့ HAART (Highly Active Anti Retroviral Therapy) ဖြစ်ပါတယ်.. ဆေးအနည်း ဆုံး (၃) မျိုးတွဲ ပေးပြီး လူနာ၏ အခြေ အနေ၊ ဆေး ရရှိမှု နဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမှု တို့ပေါ် မူတည်၍ အမြဲ မပြတ် စောင့်ကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းဖြင့် ကုသ ပေးရ ပါတယ်.. လူနာ ၏ CD4 Cell အရေ အတွက် ၂၀၀ နှင့် အောက် ရောက်လျှင် သော်၎င်း၊ သို့မဟုတ် CD4 Cell ၂၀၀ ၀န်းကျင် ဟု ယူဆ ရတဲ့ ပြင်ပ ရောဂါ လက္ခဏာ အခြေ အနေ များကို ကြည့်ရှု ၍၎င်း ဆေးပေး ကုသဖို့ ဆုံးဖြတ် ရပါတယ်.. ပထမ ဦးစား ပေးဆေး အတွဲ ကတော့2NsRTI (Lamivudine + Zidovudine (or) Stavudine) + 1 NNRTI (Nevirapine (or) Efavirenz) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ဦးစား ပေး အနေနဲ့ ကတော့2NsRTI + 1 PI ဖြစ်ပါတယ်.. ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး၊ လူနာ၏ ကျန်းမာ ရေးတိုးတက် မှုအခြေ အနေ တို့ကို အမြဲ မပြတ် စောင့်ကြည့် ရပြီး လူနာ သက်တမ်း တစ်လျှောက် လုံး ဆေးပေး နေရ ပါမယ်.. ဓါတ်ခွဲ ခန်း အဆင် ပြေသော နေရာ ဖြစ်ပါက လူနာ ၏ CD4 Cell အရေ အတွက်၊ ဗိုင်းရပ်စ် အကောင် ရေ စစ်ဆေး နေရပြီး ကုထုံး၏ ဆေးစွမ်း ပြသ မှု ရှိမရှိ နဲ့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေကို စောင့်ကြည့် နေရ ပါမယ်.. ဆေးမ ပေးမီ အခွင့် အခါ သင့် ၀င်ရောက်မှု ရှိသော တီဘီ၊ နမိုး နီးယား၊ မှက္ခရု စသည့် ရောဂါ များရှိ ပါက အရင် ကုသ ဖို့လို အပ်ပါတယ်...
HIV ပိုးပါသော သွေး/ အရည် နှင့် မတော် တဆ ထိခိုက် မိခြင်း တွင် အောက်ပါ အခြေ အနေ (၄)မျိုး ဖြစ်နိုင် ပါတယ်..
HIV လူနာ တွင် သုံးသော ဆေးထိုး အပ် (သို့) ချွန်သော အရာဖြင့် ထိခိုက် စူးဝင် မိခြင်း၊
HIV လူနာ မှ သွေး (သို့) အရည် များ ပါးစပ်၊ မျက်စိ စသည့် နူးညံ့ အရေပြား (Mucous membrane) သို့ စင်မိခြင်း၊
HIV လူနာ မှ သွေး (သို့) အရည် များ ဒဏ်ရာ မရှိ သော ပုံမှန် အရေ ပြားသို့ များပြား စွာ ထိစင် မိခြင်း၊
HIV လူနာ မှ သွေး (သို့) အရည် နှင့် ဒဏ်ရာ ရထားသော အရေပြား သို့ အနည်းငယ် သာ ထိမိခြင်း၊
အထက်ပါ အခြေ အနေ (၄) မျိုးတွင် ပထမ (၂) မျိုးသည် ဆေးသောက် ကာကွယ် ဖို့ လိုအပ်ပြီး ဒုတိယ (၂) မျိုးမှာ အခြေ အနေပေါ် မူတည်ပြီး စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်... ဆေး (၃) မျိုး ကို ၄ ပတ်ကြာ သောက်ရ မှာ ဖြစ်ပြီး မတော် တဆ ထိတွေ့ မိပြီး ၂ နာရီ မှ ၂၄ နာရီ အတွင်း စသောက် ရပါမယ်.. အကယ်၍ ဆေးရ ရှိမှု အဆင်သင့် မဖြစ် ပါက ၄၈ နာရီ မှ ၇၂ နာရီ ထက် နောက်မကျ စေဘဲ ဆေးသောက် သင့်ပါတယ်.. ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ရှိသဖြင့် ဆေးသောက် ရာမှာ လည်း နားလည် တတ်ကျွမ်း သော ဆရာဝန် ၏ ကြီးကြပ် စောင့်ကြည့် မှုအောက် တွင်သာ သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်.. သောက်ရမယ့် ဆေးအတွဲ တွေကတော့
ပထမဦးစားပေး သောက်သုံးရမည့် ဆေးတွဲ
Zidovudine 300 mg twice daily
Efavirenz 600 mg once daily (OR) Indinavir 800 mg3timesaday
ဒုတိယဦးစားပေး သောက်သုံးရမည့် ဆေးတွဲ
Stavudine 40 mg (if B.W > 60 kg)
Stavudine 30 mg (if B.W < 60 kg) twice daily
ရောဂါ ကာကွယ် ခြင်းအနေ နဲ့ မလို အပ်ပဲ သွေး သွင်းမှု မခံယူပဲ မဖြစ် မနေ လိုအပ် ပါက သေချာစွာ စစ်ဆေး ရန်၊ ဆေးထိုး ပိုက် ဆေးထိုး အပ်များ ကို မျှဝေ သုံးစွဲ ခြင်း မပြုရန်၊ မသန့်ရှင်းသော ကိရိယာ များဖြင့် ဆေးမင် ကြောင်ထိုး ခြင်း ဓါတ်အပ် စိုက်ခြင်း မပြု လုပ်ရန်၊ ဆေးဝန် ထမ်းများ အနေဖြင့် မတော် တဆ ထိခိုက် မှုဖြစ်စေ မည့် အပြု အမူ မျိုး ရှောင်ကြဉ် ရန် နဲ့ ကာကွယ် ထားရန်၊ လိင်ဆက် ဆံရာ တွင် အကာ အကွယ် ကွန်ဒုံး အသုံး ပြုရန်၊ သွားတိုက်တံ မုတ်ဆိတ် ရိပ်ဓါး လက်သည်း ညှပ် များကို မျှဝေ သုံးစွဲ ခြင်း မပြုရန် တို့ ဖြစ်ပါတယ်.. သာမန် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် ခြင်း၊ အတူ စားသုံး သွားလာ နေထိုင် ခြင်းတို့ ဖြင့် ရောဂါ ကူးစက် နိုင်ခြင်း မရှိပါ.. မိခင်တွင် HIV ကူးစက် ခံထား ရပါက ရင်သွေး ငယ်သို့ ကူးစက် မှု နည်းအောင် ကိုယ်ဝန် ဆောင် ကာလ နှင့် မီးဖွားစဉ် အတွင်း ဆေးသောက် ကာကွယ် နိုင်ပါ တယ်.. ယခု အခါ HIV ကာကွယ် ဆေး၏ လမ်းစ ကို တွေ့ရှိ ပြီဖြစ် ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ နောက်ဆုံး ပတ်က သတင်း ဌာနများမှ ကြေငြာ သွားခဲ့ ပါကြောင်း ရေးသား လိုက်ရ ပါတယ်... အားလုံး ဘေးဘယာ အပေါင်းမှ ကင်းဝေး ကြပါစေ...။
>>Guidelines for the clinical management of HIV/AIDS in adults and adolescents by National AIDS-STD Prevention and Control Programme, DOH, MOH, Myanmar printed in December 2004
Labels: Communicable disease, HIV/AIDS
HIV / AIDS ရောဂါ ဟာ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပြုနေဆဲ ကပ်ရောဂါကို အခုလိုစုံစုံလင်လင် (မြန်မာလိုရေးသား)ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် ဒေါက်တာဝင်းသိန်းကို အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ ယခုကဲ့သို့ ပညာဒါနများများပြုနိုင်ပါစေ.........
ကျတော်သိချင်နေတဲ့ ဒေတာတွေ သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျတော်သိချင်တာက window period ကာလ ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာကိုပါ။ hiv နဲ့ပက်သက်ပီး ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ် ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာ နှစ်နှစ်ကျော်ပါပီ။ အခုတော့ ရေးဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်..
HIV Positive ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးပုံ
မှန်သောက်ပြီး အစားအသောက်နှင့်ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သွားရင် အသက်ဘယ်နှနှစ်ထိ နေနိုင်ပါသလဲခင်
ဗျာ။ ၄င်းဆေးများကိုလည်း မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်ပါသလဲခင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော်တို့သုတေသန သမားအတွက် အများကြီးအထောက်အကူရပါတယ် မကြာသော
ကာလမှာ AIDS ရောဂါပျောက်ကင်းစေမည့်ဆေးနှင့် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုအမြစ်ပြတ်ရှင်းလင်းနှိင်မည့်ဆေးကိုကျနော်တုိ့မြန်မာပြည်က ရိုးရာဆေးသုတေသနသမားတွေကဖော်ထုတ်နှိင်ပါတော့မယ် မဖြစ်နှိင်ဘူးဆိုတာတွေကိုလက်တွေ့ ပြပါမယ်
Junary72011:8 BM
Saw Hman said...
I had suffered this disease for one year but i did not take any treatment. so that what shell i do and what do i have to do